‘IMaphumulo angeke isafana nakuqala’ | Eyethu News
‘IMaphumulo angeke isafana nakuqala’
“Ikomidi belivakashele kulendawo.”
Esithombeni ngamalunga eKomidi lezokuThuthukiswa kwamaBhizinisi amaNcane, yizikhulu zoMnyango wezokuThuthukiswa kwamaBhizinisi amaNcane kanye nezikhulu zikamasipala weLembe, ngesikhathi beKwaMaphumulo ngeviki eledlule
Inkampani engumfelandawonye esebenzela emphakathini waKwaMaphumulo esifundeni seLembe, neyaziwa ngele-Yawheh Shamaah Cooperative (YSC), isiye yafunga yagomela ukuthi le ndawo yaKwaMaphumulo, nokuyindawo esemaphandleni futhi ekhungethwe wububha, ngeke isafana nakuqala.
Lokhu kuye kwathenjiswa ngusihlalo wale nhlangano, uFikile Twala, ngeviki eledlule ngesikhathi kuvakashele kule ndawo ikomidi lasephalamende elibhekele ezokuThuthukiswa kwamaBhizinisi amaNcane (Small Business Development).
Enaba ngaleli phupho, uTwala uthe, “Sinephupho. Sifuna indawo yaKwaMaphumulo ibe ngcono. Siyawethemba uhulumeni ukuthi uzoqhubeka nokusisekela. Indawo yaKwaMaphumulo kanye nesifunda seLembe sisonke ngeke sisafana nakuqala”.
Amalungu ekomidi nabehambisana nezikhulu zomnyango kazwelonke wezokuThuthukiswa kwamaBhizinisi amaNcane, bafike kule ndawo yaKwaMaphumulo ukuzovakashela lolu hlelo behambisana nezikhulu zikamasipala waKwaMaphumulo kanye nezikhulu zikamasipala wesifunda.
Ithimba leli libuye lavakashela nasendaweni yaseNdwedwe nalapho livakashelee khona omunye umfelandawonye okuthiwa yi-Insabelele Primary Cooperative (IPC). Ithimba beliholwa ngusihlalo wekomidi, uNkk Nozabelo Bhengu, nothe kuyisifiso sabo njengekomidi ukuthi le mifelandawonye yethulwe kahle komasipala bendawo kanye nakumasipala wesifunda ukuze nezinye izigceme esifundeni seLembe zikwazi ukuthatha isibonelo esihle kuyona.
Imifelandawonye lena yomibili iye yanikelelwa ngezinto zokulima, yizinto zokuchelela kanye nezokubiyela imiklamo yazo.
IMeya yesifunda seLembe, uKhansela Siduduzo Gumede ukushayele ihlombe ukuvakashela kwekomidi kanye nomnyango esifundeni seLembe.
“Njengoba senifikile nje kulesi sifunda sethu, lokhu kusinikeza ithuba lokuthi sibheke indlela esingasebenzisana ngayo ngcono thina njengesifunda kanye nani njengohulumeni kazwelonke. Njengesifunda sinazo izinhlelo zezolimo, nezisingethwe yisikhungo sethu sezokuthuthukiswa kwezomnotho. Nginesiqiniseko sokuthi kuningi esingakufunda nathi,” kusho iMeya uGumede.
Ukwethuka ngokushona kukaRay Phiri